Dhismayaasha Dhoobley qaarkood oo uu gabbalku u dhacay iyagoo gubanaya, iyo Al-shabaab oo lagala wareegey. – Radio Daljir
Dhismayaasha Dhoobley qaarkood oo uu gabbalku u dhacay iyagoo gubanaya, iyo Al-shabaab oo lagala wareegey.
Abriil 3, 2011 12:00 b 0
Dhoobley, Apr 03 – Wararka ka imanaya degmada Dhoobley ee gobolka Jubadda Hoose ayaa sheegaya kaddib dagaal qadhaadh oo maanta saacado xidhiidh ah ka dhacayay degmadaasi in uu khasaare muuqda soo gaadhsiiyay dhismaha magaaladaasi, xilli in badan oo guryahaya iyo goobaha ganacsiga magaaladaas uu caawa gabbalku u dhacay iyaga oo gubanaya.
Degmada Dhoobley waxaa imika gacanta ku haya ciidamo taabacsan dowladda federaalka KM ah, kuwaas dagaal ay duqayo ba’ani ka horreeyeen maanta ku soo qaaday magaaladaasi.
Guud ahaan dadkii degganaa Dhoobley ayaa dibadda ka jooga, kaddib dagaallo soo noq-noqday toddobaadadii ugu dambeeyey oo ciidamada dowlada iyo kuwa ururka Alshabaab halkaas ku dhex maray.
Qaar ka mid ah dadka degmadaas ka cararay oo jooga duleedada Dhooblay oo aan maanta isgaadhsiinta kula xidhiidhnay ayaa sheegey in rasaas habaw ah oo ka imanaysa miidaanka dirirta ee Dhoobley ay soo gaadhay duleedada ay dadka degmadaasi qaarkood wali barakaca ku jogaan.
Dhoobley ayaa ah degaanka ugu ba’an koonfurta shishe ee Soomaaliya ee ay dagaallada u dhexeeya Alshabaab iyo DFKM uu ku soo noqnoqday. Gacan ku haynta degmadaasi waxa ay noqotay mid ay dhow iskugu bedbeddelaan dhinacyada ay dirirtu halkaas ku dhex marayso.
Adam Shardi Axmed
Warbixin: Shirka Nairobi ee wada-tashiga iyo aragtiyada dhinacyada.
Wafuud ka socda dawladaha U.K. iyo Norway oo Booqday Puntland.